Malunga Nathi-Hunan Astiland Zonyango Aesthetics Iteknoloji Co., Ltd.
I-Astiland- Umvelisi ophambili waseTshayina wezixhobo zokwenza ubuhle bonyango lobugcisa, Sizinikela ekuboneleleni uyilo, i-RD, ukwenziwa kunye nentengiso kuluhlu olubanzi lwezicelo njengoko kungezantsi:
UkuSuswa kweNwele ngokusisigxina
Ukubuyisela kwimeko yesiqhelo emva kokubeleka
I-laser yokujongana kwakhona
Unyango lwe-Vascular Lesion
Iitekhnoloji ezinxulumene noko zibandakanya iShockwave, i-IPL, i-Q-switched nd yag Laser, i-CO2 eqhekezayo yelaser, RF, HIFU, Cryolipolysis, Photodynamic njl.
Ewe ngenkqubo yentengiso egqityiweyo, sithengise izixhobo zoncedo zoncedo lobuhle ezingonakalisiyo kunye namaqonga okusetyenzwa kwe-mufti ngaphezulu kwamazwe angama-30 kwaye aziwa kakuhle ngokubanzi njengokhuseleko, nokusebenza lula. Ukusebenza ngokugqwesileyo kunye nomgangatho obalaseleyo.
"Umgangatho ngowona mveliso uphambili" ngumgaqo wenkampani yethu. Saye saqinisekiswa yi-ISO 9000, ISO 13485, CE. Yonke into eneemveliso zethu iveliswe ngokungqongqo ngokwemigangatho yokhuseleko lwehlabathi. Sonyusa ukoneliseka ngumthengi kwimveliso yethu esetyenziswa ngokupheleleyo kwezonyango, ukhathalelo, ukhathalelo lwekhaya kunye nenkonzo yobuhle.
Sigxininisa kuphando oluqhubekayo kunye nokuyila ubugcisa obuphambili kwezonyango. Kwaye soloko uthatha ukubala okuninzi komsebenzi we-QC kunye nokuziva ugxile kubathengi. Siyaqhubeka nokukhula kutyalo-mali kubuchwephesha, sisebenzisa ngokupheleleyo izibonelelo zetekhnoloji, siphucula inkonzo, kwaye sisoloko sigcwalisa isicwangciso soqeqesho lwabasebenzi kunye neendlela zokukhuthaza zeshishini, ukwenza iqela elinetalente ephezulu, ukwenza isiseko esomeleleyo sophando lwezesayensi. kunye nabasebenzi kwinjongo ezizinzileyo zophuhliso kwixa elizayo.
Ukusebenza kweyona nto ibaluleke kakhulu kwiqela lethu emva kwentengiso. Sijonge ukusombulula ingxaki ngaphakathi kwelona xesha lifutshane ngokusisiseko kuba sikuqonda kakuhle ukuba lithetha ukuthini igama kuthi. Kuyasinyanzela ukuba senze konke okusemandleni ethu ukuze sisebenzise inkonzo kunye nolawulo lomgangatho.
Yenze kunye, wabelane ngayo!
Umyalezo we-Astiland "Nika izisombululo ezizizo zeendleko zokungathandani ngobuhle bokunyanga" Siyathemba ukuba abantu bazonwabele izibonelelo zethekhnoloji yobuhle obuphambili, obunokuthi luzise utshintsho kunye nokuzithemba kubo. Siyinkampani nje, senza isizathu esingcwele. Ndinethemba elingazenzisiyo lokuba uza kusebenzisana nawe, uzuze umsebenzi oqaqambileyo kwikamva lamabala obugcisa bezonyango, kunye nengomso elingcono.
Isatifikethi seEC / LVD
Isatifikethi seEC / EMC
Uhlobo lwelayisensi yokuthengisa izixhobo zonyango zohlobo II
Ngenisa kunye nokuthumela ilungelo lokurhweba ngaphandle
Inkampani yethu ineqela eliqeqeshiweyo lenkxaso kubuchwephesha. Bonke oochwephesha bethu baqeqeshiwe kwaye baqeqeshwa ngokuqinileyo liSebe lobuchwephesha.
Bonke ubuchwephesha bethu baqeqeshwa kakuhle lisebe lezobugcisa ukuqinisekisa ukuthunyelwa kweemveliso ngaphandle kwengxaki.
1. Inkonzo yo kufakwa
I-Astiland ibonelela ngenkonzo yokufaka simahla kubathengi abatsha. Ingcali yendawo iya kuqhakamshelana nomthengi ngokwenza idinga lokufaka kunye nabathengi. Ngaphandle koko, sikwabonelela ngokufakwa kwezixhobo, ukuhambisa iinkonzo kunye nokuyalela ukusebenza kliniki.
* Faka isicelo kuphela kwindawo ekusetyenzwa kuyo ye-Astiland okanye indawo yabathengisi.
2. Inkonzo yesondlo
Kwimeko yokonakala kwezixhobo, nxibelelana kwangoko neengcali zethu zengingqi ukwenza idinga ngokuvuma. Siyakuqinisekisa ukuba,
Phendula malunga neeyure ezi-8
Indawo ebonakalayo kwisithuba seeyure ezingama-48.
Inkonzo yolondolozo iiyure ezingama-24
(Ngaphandle kweholide ezisemthethweni kunye neemeko ezizodwa)
3. Inkxaso yoqeqesho lokusebenza
Ukuze ugcine ikhosi efanelekileyo yonyango. Asifuni kuphela inkxaso evela kwizixhobo ezilungileyo. Kodwa kwakhona ichanekile kwaye inobuchule imisebenzi yeklinikhi njengokhuphiswano oluphambili. Njengeqela leenkonzo ezingqongqo, Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba amava kunye nobuchule babasebenzi bezonyango kubalulekile.
Sigcina ukuphucula izixhobo zeklinikhi zedatha yezonyango ehlelwe ziingcali zehlabathi. Kwaye sabele abathengi bethu ukuba bazive iimveliso zichanekile kwaye bazithemba kwiimveliso zethu. Okwangoku, siyikhathalele ingxelo evela kubathengi bethu. Siza kushwankathela yonke imibuzo odibene nayo kwaye siyisebenzele kwaye sabelane nabaxumi.
4. Inkonzo yokuHlaziya izixhobo
Itekhnoloji ye-aesthetic yonyango iphuhlisa ngokukhawuleza, itekhnoloji entsha iya kuzisa imfuno entsha yentengiso. Siza kwazisa iimveliso ezintsha kunye nemisebenzi ngexesha, kwaye zibonelele ngemisebenzi emitsha yokufaka kunye neenkonzo zoqeqesho. Kwangelo xesha, sikwamkela iinkonzo zorhwebo.
Ukubandakanya ikopi yenyuso, iiposta, ividiyo, ilayisensi kunye nezinye izinto
Nika imisebenzi yentengiso yobuhle efanelekileyo eTshayina, ukunceda isaluni yobuhle ngokukhawuleza ukufumana indawo ekuthengiswa kuyo
Nika inkxaso kwimisebenzi yentengiso esekwe kusetyenziso lweemveliso, ukunceda ukufikelela kwiziphumo ezilungileyo
Iwebhusayithi esemthethweni, Wechat, Facebook, YouTube kunye nezinye iindaba zokushukumisa, ukusebenzisana, njl.
Isikhokelo sekliniki sabasebenzi kwinkampani
Uncedo lwekliniki kwisibhedlele
Bamba iklasi yoqeqesho lwenqila